Madaxweyne Farmaajo: Shirka London shidaal laguma xaraashayo – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo: Shirka London shidaal laguma xaraashayo
February 7, 2019 February 7, 2019 Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul uga hadlay Shirka maanta ka furmaya magaalada London ee xarunta dalka UK, kaas oo looga hadlayo Shidaalka Soomaaliya. Shirkaan ayaa muran badan ka dhax-dhaliyay Siyaasiinta iyo Bulshada Soomaalida waxaana hada socda banaanbax looga soo horjeedo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin wax shidaal ah oo la iib geynayo balse Shirkaas lagu soo bandhigi doono Cilmi baaris laga sameeyay Soomaaliya oo ku aadan Shidaalka dalka dhax ceegaaga. Sidoo kale waxa uu sheegay in Shirkaan uu daba joogo shir kale oo ka sii horeeyay kaas oo la qabtay Xiligii Dowladii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
“Ma jirto xaraash iyo Iib geen midna, waxaa halkaasi lagu soo bandhigi doonaa oo kaliya baaritaankii lagu sameeyay Shidaalka Soomaaliya waxaana sameeyay hey’ado caalami ah”, ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Maxamed C/llaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale dhaliilay qaabka tabinta Warbaahinta Soomaalida iyo kuwa kale ee caalamka ee Shirka ka qabsoomaya magaalada London ee dalka Ingiriiska, Shirkaas oo looga hadlayo Shidaalka Soomaaliya.
“Warbaahinta dunida ayaa buun-buunisay warka shidaalka ku saabsan, wax kasta oo ay ka sheegayn sax maahan, dan gaar ah ayey ka eegayn”, ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
“Warbaahinta waxaa lagu leeyahay deeyn, qaarkood Ceymis ayey ku jiraan, si ay u helaan lacag iyo dhageestiyaal oo warkooda u gadmo ayey been ka sheegayn shirkaas” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Madaxweyanah Soomaaliya ayaa sidoo kale weerar afka ah ku qaaday dadka Shirka ka soo horjeeda ee siyaasiinta ah” Siyaasiinta Xanaaqsan ayaa ka dambeyso kicinta dadweynaha iyo ka been sheegidda Shirka” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. “Siyaasiinta Xanaaqsan iyo kuwa yar yar ayaa raba in dowladda iyo shacabkeeda iska horkeenaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dalbaday Shacabka Soomaaliyeed in ay is dejiyaan ayna ku kalsoonaan dowladooda. Boqolaal shacab ah ayaa maanta taagan banaanka Hoteelka lagu qabanayo Shirka London kuwaas oo dalbanayo in Shirkaas lagu iib gayniin 50 xirmo oo shidaalka Soomaaliya.
Shirkaan ayaa waxaa ka soo horjeestay inta badan Xisbiyada Siyaasadda, Xildhibaano, Senatoro iyo sidoo kale Siyaasiin caan ah kuwaas oo dhamaantoodba ku taliyay in aan la qaban Shirka London.
Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo wafdigiisa oo maanta magaalada Seoul Shir uga qayb galaya
Baarlamaanka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo Xasaanadda ka qaaday 12 Xildhibaan